Umnyhadala ka-Apple wango-Epreli 20 ngoku usemthethweni | Ndisuka mac
Ngale ntsasa kuvele amarhe okuba siza kuba nomnyhadala we-Apple ngo-Epreli 20. Kubonakala ngathi ukuba ubuzile Siri kumnyhadala olandelayo wenkampani, ndingakunika loo mhla. Ukufumanisa kwam, ndiyizamile kwaye ayisebenzi.
Ke bekungacaci ukuba "yinyani", okanye ibug kwinkqubo ka-Apple. Ngeli xesha, sinokuqinisekisa ukuba inkampani ibhengeze ngokusesikweni ukuba izakubamba umcimbi olandelayo 20 yale nyanga.
Kusemthethweni ngoku. U-Apple uqinisekise nje kwimizuzu embalwa edlulileyo ukuba elandelayo NgoLwesibini, Aprili 20 Ngentsimbi yesi-19 emva kwemini ixesha laseSpain, siya kuba nokuqeshwa okwenyani okuqhelekileyo nabaphathi benkampani ukuza kuthi ga ngoku.
Amarhe asasazekile kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo xa abasebenzisi abaliqela befumanise ukuba xa bebuza uSiri malunga nomsitho olandelayo we-Apple, uphendule ngomhla we-20 ka-Epreli. Ngokukhawuleza impazamo ilungisiwe yi-Apple, kodwa umvundla wawusele uphakanyisiwe.
Ayiloxesha lokuqala ukuba uSiri asixelele ngomnyhadala wenkampani ngaphambi kokuba ube semthethweni. Kwi-2016 Siri ilindele umhla we WWDC ngaloo nyaka, kwaye ngoku yenzekile kwakhona.
Ngoku kufuneka sazi ukuba baya kusibonisa ntoni na. Sicinga ukuba entsha iPad Pro, Kwaye mhlawumbi nenye imodeli ye-Apple Silicon. Ukuba sele sineMic Mini kunye neMacBooks, into esengqiqweni inokuba zezinye iMac kunye neprosesa ye-M1. Kungakuhle.
UJon Prosser uqinisekile ukuba uzokutsiba kwakamsinya ekhomba ukuba baya kuzisa amaphupha abo AirTags. Kodwa kuyakwenzeka njengebali lengcuka. Akukho mntu uya kuyikholelwa, kwaye wham, UTim Cook uyayikhupha epokothweni. Okanye hayi…
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Umnyhadala ka-Apple wango-Epreli 20 ngoku usemthethweni
UWill Smith's Apple TV + Movie "Emancipation" Ufuna iimeko ezintsha